मूर्ति बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै थापा, एउटै मूर्तिको एक लाख सम्म पर्छ मूल्य – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun मूर्ति बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै थापा, एउटै मूर्तिको एक लाख सम्म पर्छ मूल्य – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun
२७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार २१:२०
व्यास- १० सेवर निवासी सूर्य थापा माटोलाई भानुभक्त आचार्यको रूप दिँदैछन् । लोपोन्मुख मूर्तिकलालाई जीवित राख्ने प्रयासमा लागेका थापा हिजो आज लक डाउनको खाली समयमा मूर्ति बनाउने काममा तल्लिन्ताका साथ लागि परेका छन् । सानै देखि हस्तकलामा विशेष रुचि राख्दै आएका उनले औपचारिक तालिम भने न लिएको र आफैले सिकेर मूर्तिहरू बनाउँदै आएका बताए । उनले प्रति मूर्ति १ लाख सम्ममा वेच्ने गरेका छन् । विभिन्न संस्था र स्थानिय तहहरुले ठूलो परिमाणमा देशका विभिन्न ठाउँबाट अर्डर दिने गरेको उनले बताए । तस्बिरमा देखिएको भानुभक्तको मूर्तिलाई उनले ७० हजार रुपैयाँमा अर्डर लिएर तयार पारेको बताए । चौधरी ग्रुप अफ कम्पनीका मार्केटिङ म्यानेजर समेत रहेका उनी कृषि र पशुपालनमा पनि उत्तिकै मेहनत गर्छन् । व्यवसायिक रुपमा हाँस तथा कुखुरा पालन गर्दै आएका उनले मूर्ति बनाउने, कृषि फर्ममा खटिने देखि लिएर कम्पनीको बजार व्यवस्थापन लगाएतका सबै कामलाई समय निकाल्ने गर्छन् ।
थापाले निर्माण गरेको भानुभक्तको मूर्ति
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार २१:२० 499 Viewed